Hena tsy lany eny an-tsena Hanaovana saosisy na hamidy mora amin’ny mpaka maro
Mora fantatra ny hena hamidy eny an-tsena rehefa tsy vaovao. Efa maimaina mantsy no fijery azy no sady mamoaka fofona koa. Raha araka ny resaka nifanaovana tamina mpivarokena iray dia roa andro eo ihany ny hena no azo hamidy raha tsy dia mafana loatra ny andro.
Raha vao mihoatra izay mantsy izy ireny dia efa tena ratsy endrika sady mamoaka fofona. Ho an’ireo mpivarokena efa tena matihanina araka ny nambarany dia havadik’izy ireny totoina hatao saosisy ny hena raha vao tsy lany indray andro. Ny tsy hahavery ny fahatokisan’ireo mpanjifa azy no anton’izany no sady tsy hahafaty antoka azy ihany koa. Misy amin’ireo naman’izy ireo no mbola sahy mivarotra mora ny hena tsy lany amin’ireo namany hafa ka hamidiny amin’ireo mpanao hotely mora izany na koa hatokony eny amin’ny sisin-databatra eny amin’ny vidiny 500 Ar dia efa mahazo. Raha 14.000 Ar, ohatra, ny iray kilao amin’ny hena vaovao sy tsara tarehy dia hahenany 10.000 Ar. Tsiahivina anefa fa mankarary ny hena maimbo.